ट्रम्प बहिर्गमनको विश्व-सन्देशः लोकतन्त्रको अपराजयता कायमै छ
scheduleआइतवारफाल्गुन २३ गते, २०७७
आखिर डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउस छोड्नै पर्‍यो । जतिसुकै अनिच्छा भए पनि, जस्तोसुकै उपद्रो मच्चाए पनि शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको करिब २५० वर्ष लामो परम्परा उनले टार्न सकेनन् । बुधबार बिहान उनी ह्वाइट हाउसबाट निस्किए । भलै कि नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उनी बसेनन् ।
तर, ट्रम्प कार्यक्रममा सामेल नहुँदैमा बाइडेनको सपथ ग्रहण र सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया रोकिएन । अमेरिकी कर्मचारीतन्त्रले संविधान, राष्ट्र, नागरिक र लोकतन्त्रप्रतिको दायित्व पुरा गर्‍यो । ट्रम्पको उदयसँगै अमेरिकी लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणमा कुनै समस्या आउने हो कि भन्ने जुन विश्वव्यापी आशंका थियो, त्यसो भएन । अमेरिकी लोकतन्त्र र संविधानवादको परम्परा सामु ट्रम्पले घुँडा टेक्नै पर्‍यो । अमेरिकी ‘अपवादवाद’ (एसेप्सनालिज्म) को अपराजित परम्परा कायमै रह्यो ।
अमेरिकी लोकतन्त्रको इतिहासमा ट्रम्पको जतिको खराब शासनकाल सायदै कुनै राष्ट्रपतिको थियो । विश्वस्तरमा उनी उत्तिकै बदनाम रहे । तथापि ट्रम्प सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने पराजित उम्मेदवारको रेकर्ड कायम राख्न सफल भए । अमेरिका जस्तो देशको इतिहासमा ट्रम्पजस्ता राष्ट्रपतिको उदय किन भयो ? यसको ‘दिक–काल सम्बन्ध’ के थियो ? जाँदाजाँदै फेरि ट्रम्पले कसरी ७ करोड ५० लाख लोकप्रिय मत हासिल गर्न सके ? उनको खराब र बदनाम छविका बाबजुद त्यति धेरै अमेरिकी मतदाताले उनलाई किन पत्याए ? यी निश्चय नै विश्लेषण योग्य प्रश्नहरू हुन् ।
भनिन्छ– पात्र र प्रवृति, इतिहास र व्यक्तिको सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक हुन्छ । विना पात्र प्रवृति प्रकट हुन सक्दैन । ठीक त्यसै गरी विना प्रवृति पात्रको उदय हुन सक्दैन । विना इतिहास व्यक्तित्व बन्दैन । विना व्यक्तित्व इतिहास प्रकट हुँदैन ।
ट्रम्पको उत्थान र पतनमा पनि यो नियमले काम गरेको हुनु पर्दछ । ट्रम्पको जुन सनकी, झोक्की, हक्की, अहंकारी र आत्मकेन्द्रित स्वभाव थियो सायद इतिहासले पनि त्यस्तै पात्र खोजिरहेको थियो । छोटो समयका लागि किन नहोस् अन्यथा ट्रम्पको व्यक्तित्व इतिहासका लागि स्वीकार्य हुने थिएन । तर इतिहासको एक सानो कालखण्डमा लागि खलपात्रका रुपमा ट्रम्पले इतिहासलाई जुन गति दिए, त्यो उनको व्यक्तित्वको विशिष्ठता पनि हो ।
भनिन्छ– पहिलो विश्वयुद्धको पीडाले फासीवाद र मुसोलिनी, नाजीवाद र हिटलर जन्मेका थिए । उनीहरूले मानव जातिको आधुनिक इतिहासमा जुन क्षति पुर्‍याए, त्यो सायदै विस्मरणीय हुनेछ । निश्चय नै ट्रम्पले पनि थुप्रै क्षति गरे, तर मुसोलिनी र हिटलरको तहमा इतिहासले उनले उनलाई पत्याएन । ट्रम्पका इच्छाहरू के के थिए, कुन हदसम्म उनी जान चाहन्थे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्, तर अन्ततः उनी लोकतन्त्रले निर्धारित गरेको एउटा सीमाभित्र बस्न बाध्य भए । कयौं खराबीका बावजुद लोकतन्त्र कम खराब प्रणाली हो भन्ने चर्चिलको भनाई फेरी एकपटक पुष्टि भयो ।
ट्रम्पको उदय यथार्थमा सन् १९९० पछिका नवउदारवादी खराबीहरूको सञ्चिती थियो । सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपको पतनपछि जुन ‘उदार लोकतन्त्रको दिग्विजय’ को डंका पिटियो, त्यो यथार्थभन्दा बढी भावावेशपूर्ण थियो । नवउदारवादले सञ्चित गरेका खराबीहरूले सन् २०१० तिर आइपुग्दा अझ दक्षिणपन्थी मोड लिए, ट्रम्प त्यसैका सह–उत्पादन थिए ।
सोभियत संघको पतन भएर भ्लादिमिर पुटिन, पूर्वी युरोपको पतन भएर भिक्टर अर्वान वा लुकाशेन्कोजस्ता नयाँ तानाशाहहरूको उदय हुनु कुनै अर्थमा पनि लोकतन्त्रको दिग्विजय थिएन । लोकतन्त्रलाई केवल चुनावका रुपमा मात्र हेर्ने कि राजनीतिक प्रवृतिहरूको मानवीयकरणको मापदण्डबाट पनि हेर्ने त्यो प्रश्न कायमै थियो । सन् २०१० को दशकपछि विश्वव्यापीरुपमा उदय भएको नवफासीवादको चरित्र मानवीय थिएन, भलैकी त्यो निर्वाचित थियो ।
नवउदारवादी भूमण्डलीकरणका पक्कै केही दोषहरू थिए । विश्व आप्रवासन तीव्र भएको थियो, जसले रैथाने समुदायहरूमा भय र राष्ट्रवादको भावना बढेको थियो । सूचना–प्रविधिले सूचनामाथिको पहुँचलाई बढाएको थियो तर गम्भीर मूल्य बोध र सौन्दर्यकेन्द्रित विश्लेषण र ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया कमजोर भएको थियो । सुविधाको दृष्टिकोणबाट मानिसको जीवनस्तर उस्किदै गएको थियो तर आर्थिक असमानता र मानसिक तनाव उत्तिकै बढेको थियो ।
विश्वव्यापार संगठनजस्ता नयाँ संस्थाहरू उदित भएका थिए तर त्यसको लाभ साना र अल्पविकसित देशहरूलाई भन्दा उदयमान आर्थिक शक्तिहरूलाई पुगेको थियो । मानिसका भाषिक साँस्कृतिक पहिचानहरू निरन्तर अतिक्रमित भएका थिए, जसले नश्लीयतामा आधारित बर्चश्वको भावनालाई तीव्रत्तर बनाएको थियो ।
यही ‘दिक’ ले नयाँ ‘काल’ लाई जन्म दियो, जसलाई राष्ट्रवादको युग वा नवफासीवादको युग भन्न सकिन्छ । ट्वीटर र फेसबुकजस्ता ‘माइक्रो ब्लग’ कम्पनीहरूले मानव जीवनका सर्वाङ्गिक पक्षहरूलाई भन्दा कुनै एक पक्ष आधारित सूचना र विचारलाई तीव्रता दिए । मानव मनोविज्ञान एकांकी हुँदै गयो । ट्रम्पको उदयमा जतिधेरै फेसबुक र ट्वीटरको भूमिका थियो, सायदै विश्वमा यी वेब ब्लगहरूको त्यतिधेरै प्रयोग अरु कसैले गरेको होस् ।
विचारधाराको सन्तुलन कायम हुन आम सोचको सन्तुलन कायम हुनुपर्दछ । मानिसहरू एकाङ्की र तनावग्रस्त हुँदै जाँदा समाज र राष्ट्रहरू मात्र सन्तुलित भइरहन सम्भव थिएन ।
उदारीकरणसँगै आएका निजीकरण र उदारीकरणको वृहत्त आयामबारे सोच्ने फुर्सद कसैलाई थिएन । एकातिर बर्चश्ववादी सोच बढदै थियो अर्कोतिर प्रतिरोध आन्दोलनका रुपमा प्रतिबर्चश्ववादी सोच उत्तिकै तीव्र थियो । साँचो अर्थको समावेशी, सहभागितामूलक, समन्यायिक र सामञ्जस्यतापूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रयत्नहरू कमजोर भएका थिए ।
भूमण्डलीकरण वा स्थानीयकरण एकअर्काका बिल्कुल प्रतिस्थापक अवधारणा थिएनन् । बरु यी दुईबीच एक गतिशील सन्तुलनको आवश्यकता थियो । सन् १९९० पछिको करिब २ दशकले स्थानीयकरणको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गर्‍यो र एकहोरो भूमण्डलीकरणमा जोड दिन थाल्यो, जसले दुर्भाग्यपूर्ण क्षण निम्त्याउनु स्वभाविक हुन्थ्यो ।
यद्यपि काला र गोराको द्वन्द्व अमेरिकी समाजमा नयाँ थिएन । यो अमेरिकाको स्थापनाभन्दा पुरानो समस्या हो । अमेरिकी आदिवासीहरूमाथि दमन र अफ्रिकीमूलका काला जातिहरूको शोषण गरेर अमेरिकी सभ्यता, वैभव र गौरवको आधारशीला खडा भएका थिए । भूगर्भमा रहेका प्लेटहरू खजमजिँदा धर्तीमा भूकम्प गएजस्तो जगमा रहेका आधारशीलाहरू खजमजिँदा राष्ट्रमा भूकम्प जानु अस्वभाविक हुँदैनथ्यो ।
तर भूमण्डलीकृत अमेरिकामा काला र गोराको मात्र प्रश्न आज छैन । ब्ल्याक र ह्वाइटसँगै त्यहाँ अर्को कलरको जन्म भइसकेको छ, जसलाई ‘ब्राउन’ भन्ने गरिन्छ । अमेरिकी समाजका लागि एशियन, चिनियाँ, हिस्पानिक आदिहरू न त काला हुन न त गोरा । ‘ब्राउन’ हरूको एउटा भिन्नै संसार त्यहाँ बन्दै थियो, जो गोरा सर्वोच्चताको खिलाफ थिए र बर्चश्ववादका विरुद्ध लड्न कालाहरूसँग सहकार्य गर्न इच्छुक र आतुर थिए । जो बाइडेन र कमला ह्यारिसको जीतमा ह्वाइट, ब्लाक र ब्राउनहरूको एक साझा र समावेशी चरित्र प्रकट हुन्छ ।
अमेरिकामा मात्र हैन, सन् २०१० पछि राष्ट्रवादको नाममा नश्लवाद, नवफासीवाद व बर्चश्ववाद एक नयाँ ‘फेनोमेना’ बनेका छ । त्यसको प्रतिरोधमा समावेशिताको अर्को मनोविज्ञान तयार भएको छ । बर्चश्ववाद विरुद्ध समावेशिता र आत्मसम्मानको लडाई विगत दशकको मुख्य चरित्र बनेको छ । यो लडाईमा ट्रम्पको हारबाट बर्चश्ववाद कमजोर भएको र समावेशिताको सोच फेरि एकपटक हावी भएको अर्थमा लिन सकिन्छ ।
एकल राष्ट्रिय राज्यको सोच अहिले विश्वव्यापी रुपमा संकटमा परेको छ । चीन जस्तो एकछत्त हान साम्राज्यमा समेत उइगुर, तिब्बत र इनर मंगोलियाका समस्याहरू छन् । सन् १९९० पछि इथियोपिया, नाइजेरिया, बेल्जियम, नेपाललगायत कयौं देशहरू विविधतालाई आ-आफ्नै प्रकारले स्वीकार गर्दै संघीयकरण भएका छन् । यो यथार्थलाई समेत आत्मसात गर्ने हो भने ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ जस्ता अवधारणाहरू उदय हुनु कुनै आश्चर्य थिएन ।
अमेरिकाका ट्रम्प, भारतका मोदी, रुसका पुटिन, हंगेरीका अर्वान, टर्कीका एर्गोगान, ब्राजिलका बोल्सोनारो वा चीनका सि जिन पिङ उपरोक्त ‘दिक’ भन्दा बाहिरका ‘काल’ थिएनन् । तथापि उनीहरूले आफ्नै व्यक्तित्वबाट आफ्नै समय निर्माण गरे । उनीहरूलाई कसैले माया गरेर त्यहाँ पुर्‍याएको हैन । ती आफै दौडिएर गएर ती देशको सत्ताको टुप्पोमा बसेका पनि हैनन् । यी सबै आ-आफ्नो देशको राजनीतिक प्रणाली, प्रक्रिया, संविधान र समाजको मनोविज्ञानसँग एकाकार भएर उदित भए ।
ट्रम्पको ‘पपुलिज्म’ र ‘डेमागोजी’ प्रारम्भमा धेरैलाई प्रेरणाको बिषय बन्यो । कुनै नयाँ प्रवृति उदाउँदै गर्दा मानिसमा आशा जाग्नु स्वभाविक थियो । राजनीतिक जीवनको प्रारम्भमा मुसोलिनी र हिटलरले पनि जनसमुदायमा ठूलो आशा सृजना गरेका थिए । गलत आशाहरू त्यतिखेर मात्र निराशा र वितृष्णामा परिणत हुन्छ जब त्यसले खराब र अनपेक्षित परिणाम सामुन्ने ल्याउँछ ।
ट्रम्पको बर्हिगमनले समकालीन विश्व प्रवृतिका यी आयामहरू केही कमजोर भएका छन् । तर पूर्णत पराजित भएका छैनन् । समयअनुरुपको व्यक्तित्व भएन भने समय मर्न सक्दछ । व्यक्तित्व अनुसारको समय भएन भने व्यक्तित्व मर्न सक्दछ । ट्रम्पको बर्हिगमन समयको मृत्यु हो वा व्यक्तित्वको पतन अझै यसै भन्न सकिन्न । आज पनि बर्चश्ववाद, नश्लवाद, साँघुरो राष्ट्रवाद वा नवफासीवादका संकेतहरू सर्वत्र छन् । ट्रम्पले पाएको करिब ७ करोड ५० लाख भोट त्यसैको जिउँदो जाग्दो प्रमाण हो ।
ट्रम्पको बर्हिगमनले नेपाललाई दिने शिक्षा पनि उत्तिकै प्रष्ट छ । नेपाल पनि अहिले तिनै समस्याहरूमा छ । भौतिक विकास भर्सेस् आर्थिक असमानता, बर्चश्ववाद भर्सेस् समावेशिता, भूमण्डलीकरण भर्सेस् स्थानीयता, क्रोनी क्यापिटालिज्म भर्सेस् समतामूलक अर्थतन्त्र, शक्तिको केन्द्रिकरण भर्सेस् सम्मानजनक सहभागिताको चाहना समकालीन विश्वको जस्तै नेपालको पनि यथार्थ र अपेक्षा हो ।
नेपालको ओलीज्म सानो आकारको ट्रम्पिज्म हो भन्ने विश्लेषणमा विश्वास गर्नेहरू अहिले पनि यहाँ धेरै छन् । झट्ट हेर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहको गन्ध समेत आउने यो विश्लेषण पद्धति आधारहीन भने छैन । जनवरी ६ मा जसरी लोकतन्त्रको मन्दिर भनिने क्यापिटल हिलमा ट्रम्पका समर्थकहरूले हिंसात्मक आक्रमण गरेका थिए, केही फरक परिदृष्यसहित प्रधानमन्त्री ओलीले प्रनिनिधीसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरी लोकतन्त्रको मन्दिरमाथि हमला गरेकै छन् ।
बुधबार बिहान ह्वाइट हाउसबाट ट्रम्पको बर्हिगमनसँगै अमेरिकी द्विविधाले निकास पाएको छ । यहाँको दुविधा र अन्यौलको अन्त्य कसरी हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर होस् वा सडकबाट कुनै सहमति खोजेर वा नयाँ निर्वाचन भएर जुनकुनै बाटोबाट ओलीको बहिर्गमन अत्यावश्यक देखिन्छ । अन्यथा राजनीतिक द्विविधा, अन्यौल र गतिरोधले निकास पाउने सम्भावना छैन ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान विश्वासको मत पुष्टि गर्न सफल
प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासकाे प्रस्ताव आए सामना गर्ने, विश्वासकाे मत भने नलिने
विप्लव, मोहन बैद्य, आहुती र ऋषि कट्टेलको संयुक्त बैठक बस्यो, अबको रणनीतिबारे छलफल
ओली समूहको संसदीय दलको बैठकमा पनि ११५ भन्दा धेरै सांसद उपस्थित भएको दाबी
प्रधानमन्त्री बन्न हतार छैन, कोसिस पनि छैन : देउवा
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नख्खु कारागारमा, ओलीसँग के कुरा भयो ?
केपी ओली कुहिएको अन्डा हो : प्रचण्ड (भिडियो)
भाेलीदेखि सुरु हुने प्रतिनिधिसभाकाे साताैँ अधिवेशनका लागि कस्ताे छ तयारी ?
म प्रधानमन्त्रीको दौडमा छैनः देउवा
नेकपा संसदीय दलको बैठकमा ओली समूह, वामदेव कता ?
नेकपा नाम कसको ? आइतबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च
कांग्रेस कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदैनः महामन्त्री कोइराला
यी हुन् कांग्रेस संसदीय दलको बैठकका चार निर्णयहरू
सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत देशलाई निकास दिनुपर्ने समय आयो– कमल थापा
संसदीय दलको नेता बनेपछि प्रचण्डले भने- ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउँछौँ
वामदेव भेट्न ओली पुगे भैँसेपाटी
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावबारे के गर्ने भन्नेबारे कांग्रेसमा दोधार
सहमतिलाई कुर्तक र उत्तेजनाको दृष्टिले नर्हेन विप्लवको आग्रह
प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः बहुमत लिएर आउनुहुन्छः मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं, २२ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामको विषयमा रहेको विवादबारे सर्वोच्च अदालतले आइतबार फैसला सुनाउने भएको...
विप्लवसँग एउटै पार्टीमा रहेर काम गर्ने प्रचण्डको चाहना
काठमाडौं, २२ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेत्रविक्रम...
मेलम्चीको पानी आज काठमाडौं आइपुग्दै, अवलोकनका लागि प्रम ओली जाने
काठमाडौं, २२ फागुन । बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी आज काठमाडौंको सुन्दरीजलमा आइपुग्ने भएको छ । यही फागुन...
काठमाडौं, २२ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ओली समूहले पनि आफूहरुको संसदीय दलको बैठकमा पनि ११५ भन्दा धेरै सांसद...
काठमाडौं, २२ फागुन । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले आफूहरुले सशस्त्र...
काठमाडाैं, २२ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वासकाे प्रस्ताव आए त्यसकाे सामना गर्ने भएकाे छ । तर, विश्वासकाे...
काठमाडौँ, २२ फागुन । विभाजित नेकपाको ओली समूहले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । शनिबार तीन बजे बालुवाटारमा डाकेको संसदीय दलको...
काठमाडौं, २२ माघ । दार्चुलामा जीप दुर्घटना भएको छ । शनिबार साँझ शैल्यशिखर नगरपालिका ८ अमोलीबाट लेकम गाउँपालिका ४ रिठाचौपातातर्फ...